Izinkampani Zokulawula Izinambuzane eLondon
Real Estate Listings: » Business Directory » Pest Control » GB » London » Izinkampani Zokulawula Izinambuzane eLondon1
United Kingdom, London, London, WC2N 5DU
Ukuvuselelwa kokugcina 2020-10-16
Ikhodi Yokuposa: WC2N 5DU
Kunzima ukukhetha umhlinzeki ongcono kakhulu wezinsizakalo zokulawula izinambuzane eLondon. Futhi, kunezinkampani ezahlukahlukene ezinikezela ngalezo zinsizakalo. Inkampani yethu, i-Panther Pest Control, isendaweni isikhathi eside futhi ngaleso sikhathi sikwazile ukunikeza usizo olungcono kubantu bendawo ukuqeda izinkinga zabo ngamagundane nezinye izinambuzane ezahlukahlukene. Eminye yemisebenzi yethu ukulawulwa kwamagundane namagundane, ukwelashwa kwezimbungulu, ukulawulwa kwamajuba, ukwelashwa kweminyovu noma iminyovu, ukwelashwa kwamaphela nokunye. Ungahlola uhlu oluphelele lwezinsizakalo kuwebhusayithi yethu. Zonke zigcwaliseka ngokuqothula izinambuzane eziqinisekisiwe ezisebenza ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme. Umhlinzeki wethu omkhulu wemikhiqizo yi-1env Solutions. Nazi ezinye zezinzuzo zokukhetha inkampani yethu kumhlinzeki wakho oyinhloko wezinsizakalo zokulawula izinambuzane. Okokuqala, sinesikimu sokusebenza esiguquguqukayo esilingana nesakho. Futhi, uma kuyisimo esiphuthumayo singakuthumela iqembu lokusekela elingu-24/7. Okwesibili, ungaba nesiqinisekiso sezinyanga ezi-3. Ungaxhumana nathi noma nini lapho ufuna ku-020 3404 5177.
020 3404 xxxx Khombisa
Ibhaliswe ku 16. Oct 2020
Xhumana nomkhangisi 020 3404 xxxx
Ibhaliswe ku October 16, 2020
Izikole eziseduzane WC2N 5DU